Xog: Xageey Alshabaab ku diyaariyaan Qaraxyadda ay ka gaystaan Muqdisho,? – Hornafrik Media Network
Alshabaab tan iyo markii laga saaray Magaaladda Muqdisho waxay Alshabaab si aan muuqan dhaq dhaqaaqyo uga samaynayeen Magaaladda Muqdisho, iyadoo Degmooyinka Qaar la aaminsan yahay in Kooxdu ay si dadban uga taliyaan. Waxayna taasi keentay in meelaha qaar ay Shacabku u nuglaadaan Amaradda Kooxda, taasoo caqabad ku noqotay Dawladda Somalia.
Kooxdu waxay Qaraxyo ka samaysaa Muqdisho, iyadoo weerarta Hoteeladda Shacabka, Xarumaha Dawladda, Goobaha la isugu yimaado iyo Suuqyadda, Waxaana Qaraxyadda daba socda Maleeshiyaad hubaysan oo Xasuuqa Shacabka ka bad baada Weeraradda Qaraxyadda ah ay sameeyaan, iyadoo kadibna ay Maleeshiyaadkaasi isku dayaan inay Saacado badan ka dhex dagaalamaan Dhismayaasha ay qabsadaan.
Qaraxyadda ay Kooxdu gaysato waxay ku muujiyaan inay Awood ahaan wali jiraan, isla markaana ay gaari karaan Bartilmaameedkooda Gudaha Muqdisho, iyadoo aysan ka war helin Sirdoonka Somalia, Hase yeeshee taasi uma ahan Guul marka laga eego dhinaco kale, waayo waxay marba marka ka dambaysa sii kordhaysaa Nacaybka ay u qabaan Shacabka oo ugu dambayntii gaaray in loo gartay Weeraradooda kuwa aan cidna loogu turayn Shacab iyo Dawlad.
Hadaba Qaraxyadaasi Xageey ku diyaariyaan,?
Qaraxyadan inta badan Kooxdu waxay ku diyaarisaa Degmooyinka Muqdsiho, Waxaana ka mida Goobaha ay ku diyaarsadaan Qaraxyadda Garaashyadda Baabuurta lagu sameeyo, kuwaas oo qaarkood ay gacan saar la leeyihiin, halka qaarna iyagoo aan ogayn ku dul shaqaysta. Waxay sidoo kale isticmaalaan Guryo Qarsoodi oo ku dhex yaala Degmooyinka ay Dawladda Somalia awooda ku leedahay, kuwaas oo aan inta badan laga shakin waxa ka dhex socda.
inta badan Qaraxyadda ay ku diyaarsadaan Garaashyadda iyo Guryaha Muqdisho waa kuwa ay u isticmaalaan Gawaaridda yar yar ama qof lagu soo xiro. Waxayna sidoo kale Gudaha Magaaladda ku diyaariyaan Maleeshiyaadka fuliya Weeraradda Qaraxyadda kadib, kuwaas oo iyagana loogu dhamaystiro Qalabkooda Goobo Qarsoodi ah oo ay ka samaysteen Muqdisho.
Qaraxyadda loo adeegsado Gawaaridda Waawayn waxay Kooxdu ku soo diyaarsadaan Banaanka Magaaladda Muqdisho. Waxayna Xogta ay heshay Hornafrik ay muujinaysaa in Gawaaridda waawayn ee Qaraxyadda laga soo buuxiyo lagu soo diyaariyo Saldhigyo ay Kooxdu ku leedahay Degmadda Awdheegle, Tuulooyinka Sabiib iyo Caanood oo hoos tagga Degmadda Afgooye iyo Deegaano kale oo ka tirsan Gobalka Shabeeladda Hoose. Waxaana Gawaariddan la soo galiyaa Magaaladda, iyagoo lagu soo raray Dhuxul ama Qudaar si aan loo arkin Waxyaabaha Qaraxyadda.
Maxay u ogaan waayeen Ciidanka Dawladda,?
Jidadka ay soo maraan Qaraxyaddu dhamaan waxaa yaala Baro Koontarool oo ay joogaan Ciidamadda Dawladda Somalia, haddana ma ogaadaan Gawaaridda Qaraxyadda, Waxayna sababtu tahay Baabuur Xamuul sidda suurtagal ma ahan in la dajiyo Xamuulka uu siddo oo dhan, dabeetana la baaro.
Ma haystaan Ciidanku qalab suurtagalin kara in Gawaaridda la ogaado inay Qaraxyo wadaan iyo in kale, sidoo kale ma haystaan Eeyaha uriya Qaraxyadda, sababtoo ah Ciidanka Soomaalidu way ka faanaan Eeyaha, Waana wax dhaqanka Soomaalida ku adag in Eey uu Qof Soomaali ah ku shaqeeyo.
Sirdoonka Somalia oo lagu dhaliilo inta badan inaysan ogaan Xogta Qaraxyadda ka hor intaysan dhicin ma haystaan Qalab ku filan helista Macluumaadka iyo Xogaha. Ma haystaan Qalab lagu dhagaysto Isgaarsiinta Dalka, Shirkadaha Isgaarsiintana uma oggolaadaan inay ku caawiyaan Xogaha ay u baahan yihiin, iyadoona haddii ay isku dayaan in Shirkadaha ay cadaadis saaraana markiiba ay soo wacayaan Madaxda Dawladda oo difaac u ah Shirkadahan.
isku soo duuboo waxyaabahan oo dhan waxay keeneen inay adkaato in wax badan laga qabto Qaraxyadda Muqdisho, taasoo keentay inay sii kala fogaadaan Shacabka iyo Dawladda, iyadoona Shacabka ay markasta u arkaan in Dawladda aan la isku wada dhiibi karin oo aysan damaanad qaadi karin Ammaankooda, Waxay sidoo kale qaraxyaddan sii kordhiyaan Nacaybka ay Shacabku qaadeen Kooxdeen Alshabaab.
Kooxda Alshabaab sanadkii tagay waxay Caalamku u aqoonsadeen Kooxda ugu dhiig daadinta badan Caalamka.
Xog: Somalia oo noqotay Dalka ugu qaalisan ee laga soo xajiyo, Isbarbar dhig Xajka Somalia iyo Caalamka.